बैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि प्रदेश २ र ५ का युवाहरूका लागि श्रम लिनका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर – PathivaraOnline
Home > समाचार > बैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि प्रदेश २ र ५ का युवाहरूका लागि श्रम लिनका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर
बैदेशिक रोजगारमा जानेहरूका लागि प्रदेश २ र ५ का युवाहरूका लागि श्रम लिनका लागि आयो यस्तो खुशीकाे खबर
admin December 30, 2018 समाचार	0
पुस, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीका लागि आजदेखि जनकपुर र बुटवलबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति लिन सकिने भएको छ । श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं धाउन नपर्ने व्यवस्था गर्न पहिलो चरणमा प्रदेश नम्बर २ को जनकपुर र प्रदेश नम्बर ५ को बुटवलबाट सेवा शुरु गरिएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
वैदेशिक रोजगारीसँग सम्बन्धित सेवाहरुलाई विकेन्द्रीत गरी सरल र सहज बनाउन प्रदेशस्तरबाटै श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने योजना रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
जनकपुर र बुटवलमा रहेका प्रदेशगत श्रम तथा रोजगार कार्यालयमा वैदेशिक रोजगार इकाइ गठन गरि सेवा दिन थालिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. नारायण रेग्मीले जानकारी दिए ।
प्रारम्भिक चरणमा यी कार्यालयहरुबाट पुनः श्रम स्वीकृति प्रदान गरिनेछ । यस्तै वैदेशिक रोजगारी सम्बन्धी इजाजत पाएका संस्थाहरु र तालिम एवं अभिमुखिकरण संस्थाहरुको अनुगमन गर्ने, सरोकारवालाहरु बीच वैदेशिक रोजगारीको सूचना तथा जानकारी सम्प्रेषण गर्ने एवं गुनासो सुनुवाई गरी सेवा प्रवाहलाई सहजीकरण गर्ने जस्ता काम ति कार्यालयहरुबाट हुनेछ ।
विस्तारै अन्य प्रदेशका श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरुबाट पनि सेवा सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । ‘गण्डकी प्रदेशको मूकाम पोखरामा लगभग तयारी सकिएको छ । यसै सातादेखि सबै प्रदेशबाट सेवा थाल्ने मन्त्रालयको तयारी छ’, स्रोतले भन्यो ।
हाल सरकारले काठमाडौंको ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार विभागको कार्यालयबाट मात्र श्रम स्वीकृति दिँदै आएको छ । ताहाचलमा श्रम इजाजत लिन अत्यधिक भिड लाग्दा ठूलो सास्ती हुने गरेको छ ।
संघीयताको मर्मअनुरुप नै काठमाडौंमा केन्द्रीकृत गरिएको सेवालाई प्रदेशसम्म लागिएको मन्त्रालयकाे भनाइ छ ।
निर्मलाको हत्यारा भनि प्रहरीले दियो यति सम्मको यातना, मारदिन्छु भन्ने सम्मको धम्की
विष्णु माझीका बुवा रुँदै भन्छन्, छोरीलाई नदेखेको ११ वर्ष भयो
OMG! दशैकाे मुखमै दाङबाट अायो सबैका मन रूवाउने यस्तो दुःखद खबर
दु:खद खबर: फेरि नवलपुरको देबचुलिमा भीषण हावाहुरी, सबैतिर यतिका धेरै क्षति! हेर्नुस्
मध्यरातमा त्रिभुवन विमानस्थलमा १३३ जना यात्रु बोकेर काठमाडौँबाट मलेसियाको क्वालालम्पुरतर्फ उड्न लागेको बिमान दुर्घटना !!